Stalin phezulu ku Barricadnaya: umlando ekhazimulayo ephezulu amakhaya ye-USSR
"Abashayeli House" noma ophahleni Barricadnaya - ingenye izimpawu eMoscow. , Ezinganekwaneni eziningi mayelana namabhilidi eziyisikhombisa uStalin, elakhiwa iminyaka ngemva kwempi. Naphezu yobudala bayo, namuhla wokwakha mangaza izivakashi, futhi Muscovites eziningi bayokujabulela ukuba uwuthenge ifulethi.
Umlando kanye nencazelo Stalin namabhilidi ku Barricadnaya
Ngo-January 1947, uStalin ngemvume isinqumo uMkhandlu woNgqongqoshe "Ngo ukwakhiwa eMoscow eliphezulu liphumele izakhiwo." Kudrino endaweni (phambilini obuwaziwa ngo Uprising Square) wakhethwa ukuze kwakhiwe omunye wakha izakhiwo ezinkulu ezibabazekayo. Ukuze ukwakhiwa kanyekanye namafomu efanayo yezakhiwo yalezi zindlu kamuva ngokusankondlo ngokuthi 'Izelamani Eziyisikhombisa. " Akhela phezu Kudrinskaya Square futhi yehle emlandweni njengoba amafu phezu Barricadnaya, ngegama eseduze metro station.
Umakhi oyinhloko iphrojekthi - AA Mndoyants, M. V Posohin. Ngesikhathi jikelele phasi umbhoshongo main yakhiwa kuleli 24 phansi (ukuphakama Imininingwane - 156 amamitha nge Spire) kanye sesibili ziyalingana ecaleni kwezindlu 18 ngamunye. Ungathola ngokusebenzisa ezintathu kompheme esikhulu eziningi Abancane. Ceiling ku Barricadnaya eyakhelwe njengoba isakhiwo sokuhlala (ingqikithi 450 amafulethi lapha), kwasinda elisezansi. Lesi sakhiwo ine ezingeni komhlaba, lapho kokuqala iphrojekthi elise yokupaka nomoya-kugasela yokukhosela.
Hhayi okunethezeka ezingaphelelwa isikhathi
Ngemva nokuthuma endlini wathola ikheli: Kudrinskaya Square 1. abaqashile kuqala wathuthela efulethini abo entwasahlobo ka-1955. Thola siqu square metres le ndlu sika Ungakhetha kuphela. Isikhathi esiningi ezindlini basakaza phakathi isivivinyo bamabhanoyi, zezindiza umkhakha abasebenzi namalungu Council of Ministers wase-USSR futhi CPSU.
umhlobiso zikanokusho kwezakhiwo zikahulumeni ingxenye kwalondolozwa kuze kube namuhla. Kovulandi esikhulu on emabhilidini - stucco, amapulangwe aphansi nenhle kwesihlahla se-okhi panel, enemibala ibala amafasitela ahlotshiswe ngokweqile kanye nezibuko. I lalolu hlangothi olungaphambili lihlotshiswe ukubaza kanye bas-imifanekiso, ubonisa isifiso izakhamuzi zaseSoviet ukusebenza, nobuciko kanye ukuzivikela.
Ceiling ku Barricadnaya - kungcono isampula ehloniphekile okunethezeka izindlu isikhathi sabo. Zonke amafulethi abe ucingo nge concierge, indle ifakwe izindlela iba yingxenye yomhlabathi imfucuza, isakhiwo kwadingeka kubhayela lalo. Esitezi lapho yayidingeka ngenjongo nezikhungo zomphakathi ukuphila. Nangu abadumile zokudla esitolo "inombolo Deli 15", i wamakhaza ice cream, eposini ayo, wezinwele nezinye izinhlangano eziningi. Ngokuvamile, amafu abadumile namaSoviet "inkanyezi" kumafilimu obalulwa imisebenzi ebhaliwe.
Umbhoshongo wase-USSR namuhla
izakhamuzi ezivamile-USSR kuphela baphupha ithola indlu yokuhlala ukunethezeka indlu enhle. Namuhla isimo sesishintshile kakhulu, futhi cishe kunoma iyiphi impahla angathengwa ngokuba ingakanani imali.
Stalin namabhilidi "Sisters Seven" usuphinde adume. Phila noma ube ehhovisi lakho siqu kwesinye salezi izakhiwo kuyinto ehlonishwa kakhulu. Nokho-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi lesi sakhiwo akuyona wonke umuntu. Indlu ku Barricadnaya akuyona ezindlini ezinkulu kakhulu. endaweni esiphezulu singu-100 kuphela square metres. amamitha. Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi ingcebo emakethe isakhiwo izindawo zokuhlala phakathi izakhiwo uStalin hopelessly yisikhathi.
Uma sikhuluma Izinkinga phezulu ku Kudrinskaya Square, kuyafaneleka ngoba zangasese amancane ekhishini ndawo. Kodwa akukhona konke okubi, njengoba kukhona izimfanelo. Residence Elite wakhulela eSoviet Union, ungakwazi ncintisana ukwethembeka ukuqina kwezakhiwo eziningi. Kusukela amafasitela amafulethi we eziyizitezi engenhla ukubukwa emangalisayo enhle-panoramic phezu enkabeni yedolobha. Ngo ukuhamba ibanga kusuka endlini kukhona ezindaweni eziningi ezithakazelisayo ukungcebeleka futhi ezikhangayo ezihlukahlukene zenhloko-dolobha.
Amakamelo okulala awabange endlini ku Barricadnaya cishe njalo isendalini. Labo abafisa ukuthenga impahla esiyingqayizivele kuyodingeka bakhokhe isizumbulu. Inani lentengo amabili okulala efulethini lapha ruble ayizigidi ezingu-35. Kulokhu, umthengi kufanele uzilungiselele kulungiswe enkulu ukuthola yayo.
Flats for Barricadnaya hhayi kuphela ithengiswe, kodwa futhi ngenkuthalo ozinikela. Izindleko iqashwe nsuku zonke - ruble 6500 ngosuku. Inyanga ukuphila kule ndlu Amazing kungabangwa ruble 150 000. Kufanele kuqashelwe ukuthi ophahleni on Barricadnaya okukhethwa kukho esihle kakhulu utshalomali. Izazi ziyavuma ukuthi udumo uStalin namabhilidi yakhe musa ulahlekelwa.
LCD "Mandarin": incazelo, unjiniyela, umnqamulajuqu kanye nokubuyekeza
Njengoba lalibizwa kanjalo Stalin namabhilidi? Kungani Stalin namabhilidi onginike leli gama?
Eside sokuqasha ezindlini e Yalta
LCD "Novoorlovsky" (Petersburg): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
LCD "Ikota Irish": incazelo uhlelo, unjiniyela kanye nokubuyekeza
Kube nokugqwala on the eliphakathi kwe. Indlela esiphatha ngayo?
I engavamile kakhulu izihlahla emhlabeni
Abezindaba - iyona cindezela, umsakazo nethelevishini njengoba abezindaba
Lapho ukuthenga Foam futhi kufanele kube njalo?
Mongolia Mid XIII B.
Yini okufanele ibe isikhwama umsubathi ngamunye?
Zikuphi ukugubha ngoMashi 8, ngaphandle kwamazwe ase-USSR yangaphambili? Ngamaphi amazwe nawo agubha ngoMashi 8?
"Of Russia, qhweba wamaphiko akho ..."
Ubani owabhala "Wini Phu"? Umlando yokuzalwa incwadi ozithandayo
Indlela yokwenza ikhadi sibhedlela ku ingane
Ukwelashwa Sand izingane zasenkulisa. isihlabathi imidwebo